Mpampianatra Oniversitera Thailandey Nampanantsoin’ny Miaramila · Global Voices teny Malagasy
Nilanja 'Sora-baventy Manohitra Ny Fitondrana Miaramila' Tao Amin'ny Fivoriambe Iraisampirenena ry zareo
Voadika ny 22 Jolay 2017 5:38 GMT
Pakawadee Weerapaspong (ankavia) sy Chaipong Samnieng (ankavanana) milanja sora-baventy mivaky hoe ‘Tsy toby miaramila ny zaikaben'ny mpampianatra oniversite’. Tsy mbola voalaza anarana ny lehilahy eo afovoany. Sary avy ao amin'ny Tambajotra Akademika Thailandey miaro ny Zon'ny Sivily.
Ity lahatsoratra nahitsy ity dia avy amin'ny Prachatai, vohikalam-baovao tsy miankina ao Thailandy, ary navoaka eto amin'ny Global Voices indray izay tafiditra ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nandrahona mpampianatra oniversite telo tao Thailandy izay voalaza fa nilanja sora-baventy manohitra ny fitondrana miaramila ny governora lefitra ao amin'ny faritany avaratra Chiang Mai.
Tamin'ny 18 Jolay 2017, nametraka taratasy ho an'ny Minisiteran'ny Atitany ny Governora Lefitra Puttipong Sirimart izay mitatitra ny fisian'ireo mpampianatra oniversite telo voalaza fa nilanja sora-baventy mivaky hoe ” Tsy toby miaramila ny fivoriambe akademika” tao amin'ny Fivoriambe Iraisampirenena faha-13 miompana amin'ny Fanabeazana Thailandey tao Chiang Mai.
Ny taratasy dia nanondro ireto olona telo ireto: i Prajak Kongkirati, mpahay siansa ara-politika avy ao amin'ny Oniversiten'ny Thammasat, i Pakawadee Weerapaspong, mpanoratra mahaleotena, mpikatroka, sady mpandika teny, ary Chaipong Samnieng, mpampianatra ao amin'ny Departemantan'ny Sosiolojia sy Antropolojia, Oniversiten'ny Chiang Mai .
Nilaza ny taratasy fa ho ampanantsoin'ny miaramila ao Chiang Mai izy telo satria nampiasa ny fivoriambe akademika izy ireo mba hanaovana hetsika manohitra ny fitondrana miaramila. Na izany aza, tsy nilaza ny fotoana tokony hanaovan'izy telo tatitra any amin'ny manampahefana ny taratasy.
Anisan'ireo akademika (mpampianatra oniversite) miisa 176 nanao sonia ny fanambarana iraisana tao amin'ny fivoriambe izy telo izay mitaky ny hamerenana ny demaokrasia. Indro ny sombiny tamin'ny fanambarana:
Tokony hanaja ny fahalalahana akademika ny fanjakana amin'ny alalan'ny famerenana ny toerana ho an'ny fahalalana ahafahan'ny olona mahazo vaovao sy ny zava-mitranga isan-karazany, ary mamela ihany koa ny fifanakalozam-pahalalana tsy misy fanafoanana, fanaraha-maso na fanodikodinam-baovao.
Nikarakara fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2014 ny miaramilan'i Thailandy ary mbola eo amin'ny fitondrana amin'ny alalan'ny lalàm-panorenana izay nolaniany tamin'ny taona 2016. Nivoady hamerina indray ny fifidianana sy ny fitondrana sivily izy ireo taorian'ny fampiharana ny fanavaozana ara-politika .
Nanampy ihany koa ny taratasin'ny governora lefitra fa nandray anjara tamin'ny hetsika manohitra ny fitondrana miaramila tamin'ny alalan'ny Tambajotra Akademika Thailandy miaro ny Zo Sivily (TANCR) izy telo ireo.
Ho setrin'izany, namoaka fanambarana ny TANCR milaza fa i Prajak Kongkirati, na dia voalaza tao amin'ny taratasy aza, dia tsy nandray anjara tamin'ny filanjana sora-baventy ary mitaky hatrany ny fahalalahana sy ny zon'olombelona ny vondrona.
Manameloka ny fepetra fampiantsoana ireo olona telo ho “mahamenatra” ny fanambarana , ary nilaza ihany koa fa tsy mandrara ny olona hilanja sora-baventy ny Lalam-panorenana 2017.
Prajak Kongkirati, mpahay siansa ara-politika fanta-daza ao amin'ny Oniversten'ny Thammasat, mamaky ny fanambarana izay nosoniavin'ny Thailandey miisa 176 sy ny akademika vahiny tao amin'ny Oniversiten'ny Chiang Mai tamin'ny 17 Jolay 2017.